“Jirra jechuuf hin jirru; hin jirru jechuuf akka hin jirretti jirra!” | Kichuu
Posted on August 6, 2020 by kichuu_admin
Goota akkanaa tanniintu QEERROO hore.Yartuun marti, Finfinnee fii Hadaamaa teettee waan agarte xebeerti.
2019 New Ethiopian Oromo Music /Qabeenya Koo Galchii /By Darajjee Daggafaa (Roomee) Official Video
Saba koo qaalii akkam jirtu? nageenyi badhaadhaa yoon jedhe Bilxiginnatu maqaa hin jijjiiramne hiika maqsee ittiin sabicha bituuf fakkeessoo kalaqxeen jecha jaalannu nu qeeqsisa. kanaaf ragaan afaan sabootaa 82 ol biyya kana keessa jiraniitti akka hin hiikamin gaafa argitudha. Bilxiginnaan afaan sadi( Prosperity, ብልፅጊና fi Badhaadhina isa jedhuun gaafa fayyadamtu afaan federaalaa siif godheera; dur afaanichi masaraa mootummaatti dubbatamee beekaa siin jetti.
Kamiifuu goyoomsaa meeqa lakkoofnee; wareegamtoota keenya fi madoo keenya erga guyyaatti hin galmeessin bullee hin beeknee har’a waggaa 4, 5 lakkoofneerra.
Lakkoofsa kanaan ana ji’i hagayyaa yeroo hunda akkan madaa koo yaadadhee ofi ceepha’u waan na taasisuuf guyyaa 6’n kanaaf fuula feesbuukii koo irraa fagaadheera.
Jiini kun yeroo hidhamtoota keenya hiiksisuu fi Wayyaanee fonqolchuuf taatee gurguddaa itti taanee dabarsinedha. Fknf (IRREECHI ARSADEE) jiini kun dhumee darbeetudha. san keessaa ani Hagayya 6, 2016 akkan hin dagannetti madaa naaf kaa’e. Guyyaan rasaasa Agaazii 3n Amboo Araadaa, mana Haacee fa’a gara irraatti reebamee siree daldalaa lafa gabaa gidduutti ofi argedha.
Kan baay’ee na aarsuu fi na xiiqeffachiisu sanirraa dandamadhee har’as hayyoota bara sani mana hidhaa turanii fi biyya alaa taa’anii qabsoo finiinsaa turan warra akka Jawar Mohammed mana hidhaatti galfamuun qabsoon aarsaa lafee, lubbuu fi dhiigaa asumaa maraammartoo naanna’uu dha. kun na madeessa. madaarratti madaa. lafee si nyaata. lafee cabsee.
Abaarsa qabnaa laata na jechisiisa. kun hundi guyyaa 6n darban kanaaf keessa koo na nyaatee akkan cufadhee imimmaan goggogaa garaatti gadi boo’u na taasisa. “Ormaaf darbaa, maaloo maaf nu darbaan?” jecha goota biyyoon nyaatteeti.
Ta’us har’i hagayyi 6, 2016 guyyaan hiriira guddichaa(Grand Rally) Oromiyaa guutuu fi Qeerroo hedduu itti dhabuun, har’as irra deebiin itti jirru natti hadhaa’e. Jiruu dachii na tuffachiise. “Kan du’e ni boqote; ni obbaafateen” jecha Haaceeti.
Yakka gara jabinaa Chaltu Takele irratti mootummaan kun hojjate.
Manni murtii mirga wabii qarshii kuma afuriin akka baatu hayyameefii ture, achi booda gara mana hidhaatti deebisan, waan garaa nama nyaatu Caaltuun haadha daa’imaati, daa’ima kiyya daqiiqama Shaniif harma akka hoosisu naaf hayyamaa jettee kadhachaa turte, ta’us mootummaan nama nyaataan kun hayyamuufii didee ture.
Caaltuu erga mirga Wabii qarshii kuma Afuriitiin akka baatu hayyamames poolisoonni mana hidhaatti deebisan, Caaltuun yeroma kana akka rakkinni jiru hubatte, bara wayyaanees waggootii hedduuf mana hidhaatti dararamaa waan turteef shira jara kanaa ni beekti, bara Nafxanyaa kanas takkaa nagayaan mana teessee hinbeektu manni hidhaa mana isii ta’eera.
Mana murtii booda eega mana hidhaatti deebisanii booda poolisoonni iddoo biraa geessuuf akka dhufan argitee mana itti hidhan keessa seenuun ofitti cuftee reeffa koottu asii baha hin banu jette, jarattiin fuutee iddoo biraatti ukkaamsuuf akka taate hubattee jirti.
Yeroo kana jarattiin Shira fokkataa gara jabeennaa dur baratan yaadutti ka’an, diqqo turanii hulaa gamaa gamanatti dhokatanii daa’ima kee fidanii jiran harma hoosifachuu hin dandeetta jedhaniin.
Garaa haadhaatii dhuguma seetee yeroo isiin hulaa bantu itti roorrisanii ukkaamsanii taraniin, iddoon isaan geessanis hin beekkamu.
Odeessa Dabalataaf VOA
Daba Caaltuu Taakkalaa irratti raawwate Gumaa Saaqqataa akkasitti ibsa.
“Guyyoota muraasa dura mirga wabii qarshii 4000 kaffaltee akka baatu murtaa’e. ‘Kun akkamitti ta’uu danda’a’ jedhanii mana hidhaa biraatti dabarsuuf dhufani. Caaltuun akka isaan gara mana hidhaa biraatti dabarsuu dhufan waan hubatteef ‘reeffakootu asii deema’ jechuun didde. Mana karaa keessaa cufattee teesse. Warri ishee fuudhanii gara biraa geessuu dhufan waan godhan dhabanii shira gara jabinaa uuman. Balbalarraa gara moggaatti goranii ‘Caaltuu: mucaankee dhufteetti; harma hoosifachuu dandeessa’ jedhan. Garaa dhalaa waan ta’eef mucaashee hoosifachuuf mana bantee gad baate. Sobaniiti malee mucaan garuu hin dhufne. Wayita kana waraanni ishee ukkaamsee ambilaansii keessa buusuun fuudhanii deeman.”
Qeerroon nyaaraan hin Bulle, Foollee Studiotiin
“DHADDACHA DIINAA IRRAA AKKAMITTI MURTII SIRRII EEGNA!
Manni murtii dabaa fi sobaa mootummaa #PP guyyaa har’aa Adoolessa 27/11/2012 ALH murtii dabaa fi ulfaataa ta’e falmattoota haqaa fi gootota Oromoo namoota sadi maqaan isaanii armaan gadii irratti dhaddachi kijibaa himata dharaa ragaa maleessa himate murtee ulfaataa waggaa 20,20,20 (digdama)muruutu dhagahame.
3.Bojaa Girmaa yemmuu ta’an mana hidhaa diinaa Qilinxoo keessatti waggaa 4 guutuu erga dararamanii booda dhaddachi har’a oole dhiibbaa fi jibba namoota dhuunfaan sabboontota sabaa kana murtii haqa maleessa kanan yemmuu adabu murtiin kana fakkaatu ilmaan Oromoof haarawa ta’uu baatus gaddisiisaa fi qaaneessaa ta’uun ifa.
Jaallan kana biraa ilmaan Oromoo akkuma isaanii siyaasan himataman kumaatamnii dhiifaman waggaa sadi dura qaamni mootummaa jijjirramaa ofiin jedhu kuni hiikee isaan sadeen qofa sababa tokko malee shira dabballoota OPDO kan taate TAAYYEE DANDA’AA fi MAASHOO OLAANAA irratti hojjatanii mooraa diinaa keessatti hambifanii murtii dabaa kanan har’a yeroo hidhamanii ol loogii fi cubbuun jiru.
Goototni kuni Oromummaa isaaniirraa kan hafe nageenya malee hammeenya tokkollee dalaganii akka hin beekne ilmaan Oromoo lafa dhaloota isaanii ragaadha.
“Hanga leenconni seenaa isaanii barreeffataniitti warruma leenca ajjeesetu leenca Ofiin jedha”akkuma jedhamu warri jaallan kanarratti shiran boru gatii harka isaanii ni argatu.
Leencoota qarree Goo’aa
Gumaan keessan dachaan ba’a!!
Hoggansa KFO Hidhaarraa Alatti Haftanii Yeroof Sabaan Alatti Haftaniif